Shabaabkii ugu badnaa oo lagu dilay dagaal ka dhacay Hiiraan... - Axadle Wararka Maanta
Buulo Burte (Axadle) – Taliyaha qeybta 27-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Gen. Axmed Maxamed Calasow Tareedisho ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo gaaraya 31-ruux lagu dilay howlgal ka dhacay Degmada Buulo Burte ee Gobolka Hiiraan.
Gen. Tareedishe waxa uu tilmaamay in ay furteen hub ay wateen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo kala ah 14 qori oo ah AK-47, hal qori oo ah BKM (Qoryaha Siliska leh), ilaa haatan howlgalkana uu ka socdo Degmada Buulo Burte.
Taliyaha ayaa intaas ku daray in howlgalka Ciidanka Xoogga Dalka ujeedkiisu yahay sidii go’doonka looga qaadi lahaa Buulo Burte oo muddo dheer ka xayiran isu socodka Gaadiidka nuucyadiisa kala duwan.
Bartamihii July 2021, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Gen. Odowaa Yuusuf Raage ayaa Degmada Buulo Burte ka dhigay taliska ugu weyn ee qaybta 27-aad CXD si looga qaado duullaanka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay Gobollada Dalka gaar ahaan Hiiraan, Shabeelaha Dhexe, Galgaduud, Mudug, Jubada Hoose, Gedo, Jubada Dhexe, Bay & Bay xili dalka uu galay xaalad Doorasho.
Howlgalka ugu xooggan ayaa wuxuu ka codsadaa Gobolka Mudug, halkaas oo Al-Shabaab laga saaray deegaano dhowr ah oo ay gacanta ku hayeen bilooyinkii ugu dambeeyey, waxayna ciidamada Dowladda ku wajahan yihiin Magaalada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Magaalada Xarardheere oo ah magaalo ganacsi badan leh ayaa waxaa dhowr sano gacanta ku hayo kooxda Al-Shabaab, waxaana la sheegay inuu halkaas kasoo galo dhaqaale xoog leh oo ka caawiya dhaq-dhaqaaqyada ciidan oo ay ka wadaan Gobolka Mudug.